Clear Akụkụ | Clear prototypes | Optics Rapid Prototyping - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
Ọrụ / Clear Prototyping
Ọtụtụ ngwa na-erite uru site na iji ihe ngosipụta doro anya na ịkpụzi nke acrylic transperent (PMMA) na polycarbonate (PC) iji nyere aka lee usoro ahụ ma ọ bụ melite aesthetics. Gụnyere ọkụ ọkụ na oriọna, ntuziaka ọkụ na ngosipụta niile chọrọ ezigbo njirimara ngwa anya.
Anyị na-elekwasị anya na nkọwa nke ngwa plastik ahụ ma nwee ihe ọmụma nke ihe ngosi anya doro anya chọrọ iji rụọ ọrụ na-enweghị ntụpọ. Ngwaahịa ikpeazu doro anya ma nwekwaa akara ma ọ bụ ọkọ.
Pụrụ iche na Mgbanwe Elu Mkpụpụta nke Clear & Optical Prototypes
CreateProto na-enye ọtụtụ ihe ngwọta maka ọdịnala doro anya na nke uzo iji mezuo ihe niile achọrọ, gụnyere ntanye CNC, nkedo agụụ, na usoro ịkpụzi ngwa ngwa. Ihe nlere anya doro anya na ngwa ntanye anya na-ezo aka na nhazi nke acrylic transperent (PMMA) na polycarbonate (PC), ọtụtụ ngwa na-ahọrọ ha iji nweta enyo doro anya.
N'oge akụrụngwa, anyị na-elekọta akụkụ plastik gị doro anya ma nwee ihe ọmụma banyere plastik chọrọ iji igwe na-enweghị ntụpọ. O doro anya na a ga-emecha kpochapụ ihe ndị dị na plastik site na iji ụzọ polishing kwesịrị ekwesị. Createproto na-eji ọkaibe omenkà nwere ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na nke a ukwuu pụrụ iche usoro. Anyị bara uru na mgbanwe ụzọ nke na-arụ ọrụ na-enye ohere ka anyị n'ụzọ zuru ezu na-akwado doro anya na ngwa anya prototype development oru ngo.
Clear acryli (PMMA) Prototype machining, CNC igwe & High polishing
Dị ka ọkachamara prototype emeputa, anyị ji onwe anyị na-eke doro anya acrylic ngwa anya mmiri na plastic machining ụlọ ọrụ. Maka ihe doro anya nke acrylic machining chọrọ, anyị mepụtara nkenke teknụzụ nkenke teknụzụ nwere ike ịnapụta ọkwa dị elu maka CNC acrylic (PMMA), nke igwefoto a na-arụzi maka ngwa anya agaghị agabiga R0.005 "(R0.125mm), na Igwe anya ihu igwe akụrụngwa ga-eru +/- 0.001 "(+/- 0.025mm).
Anyị na-aga n'ihu upgrades ka machining akụrụngwa na ịcha ngwaọrụ nyere anyị ohere ịnọgide na-enwe ndị kasị mma machined doro anya plastic akụkụ na njem. Site n'inwekwuwanye nkà na ụzụ na akụrụngwa dị elu, anyị nwere ike ịhazi ụdị ngwa ngwa dị iche iche na ụdị mgbagwoju anya ọ bụla.
Anyị na-ejikọta ikike ịkpụzi nke kacha mma jikọtara 3-axis, 4-axis ma ọ bụ ọbụna 5-axis CNC igwe igwe. Anyị na-nakweere ọhụrụ diamond machining technology na àjà ihe ọ ultraụ ultraụ nkenke n'ichepụta. Nke a bụ usoro a na - akpọ Single Point Diamond Machining (SPDM ma ọ bụ SPDT) nke nwere ike dakọtara ikike nke 5-axis micro-milling iji mepụta ọtụtụ oghere na ụdị nduzi nke ezigbo ngwa anya dị mma na usoro ma ọ bụ usoro freeform.
Ihe eji acrylic acrylic nwere ike inyere aka gosiputa ihe kacha mma na uzo oku nke plastik doro anya. Ọ bụ ezie na CNC acrylic (PMMA) dị mkpa iji nweta ezigbo ngwụcha arụmọrụ tupu ịchacha iji hụ akụkụ dị oke mkpa, ọ na-esiri ike ịnweta nghọta doro anya.
Acryli polishing chọrọ nkà pụrụ iche ebe ọ bụ na acrylic bụ ihe na-echegbu onwe ya ma bụrụ nke na-emebi emebi. Manual polishing chọrọ dị iche iche akara ule nke polishing usoro eji na njikọ na ájá akwụkwọ na polishing tapawa nke ga-ewepụ elu ihe na-ahapụ elu a elu àgwà imecha na ngwa anya doo anya.
Ukwuu polishing chọrọ sanding ọrụ malite na 400 # ma ọ bụ 600 # ájá akwụkwọ wepụ ihe agbasi ngwá ọrụ akara ibido, mgbe ahụ larịị ga-ebuli ruo 800 # -1000 # -1500 # na-agwụ site 2000 # ájá akwụkwọ, na-egbu maramara elu ga bụrụ ezigbo onye na-enweghị ezigbo igwe na akara. N'ikpeazụ, anyị ka kwesịrị iji polishing tapawa nụchaa usoro, na ikpeazụ elu bụ super doro anya na uzo na-enweghị ihe ọ bụla sanding akara na ọkọ na ngwa anya àgwà imecha.
Polycarbonate (PC) CNC machining & Alụlụlụ Igwe
Banyere polycarbonate (nke dị mkpụmkpụ dị ka PC), ike siri ike karịa acrylic, ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma karịa mgbe ejiri ya mee ihe na gburugburu ebe obibi. Polycarbonate bụkwa otu n'ime plastic na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke nke bụ nke abụọ na nghọta. Anyị na-agakarị sanding smooth & vepo polishing, ha bụ ụdị usoro nhọrọ maka ọtụtụ ngwa.
Site na ahụmịhe na-egbu maramara ọgaranya, CreateProto nwere ike ịpụta ọmarịcha ma n'ime ma mpụga akụkụ ahụ. Excellentdị mma dị elu sitere na ntụgharị uche nke ngwaọrụ ngwaọrụ, ọgwụgwọ ọkụ, igwe diamond, usoro ịkpụzi na usoro teknụzụ, ka anyị wee nwee ike rụpụta akụkụ kachasị mma yana akara ngosi ngwa ngwa kacha nta na mpaghara dị mkpa.
Mgbe anyị na-etinye ezigbo ọgwụgwọ ọkụ, usoro ịkpụzi na polishing ụzọ, polycarbonate nwekwara ike nweta ụdị arụmọrụ ahụ dịka acrylic na ọ na-ejikarị ya eme ihe na ngwa dịka oriọna, ọkpọkọ ọkụ na ngosipụta.
Enwere ike iji polishing anwụrụ iji bulie atụmatụ akụrụngwa na ihe ndị dị ka polycarbonate, ma dabara adaba maka polycarbonate na-egbu maramara nke obere njirimara ma na-enye mmelite nke imecha na imechi. A na-ewepụ obere mpempe na obere ihe ndị ọzọ na-ezighi ezi site na ịkpụzi akụkụ polycarbonate site na polpo vapo. Mgbe mere nke ọma, vepo polishing nwere ike inye ngwa anya prototypes a ezi mma imecha.
Polycarbonate polishing usoro, otu ihe ahụ dị ka akwụkwọ ntuziaka acrylic, anyị na-eji ájá ájá mee ka elu ala na-edozi mbụ iji wepụ akara ngosi ngwá ọrụ na-amalite site na 400 # ruo 2000 # sandpaper. Ejiri alụlụ ahụ site na esi mmiri na methylene chloride, wee jiri vepo na-efefe n'elu polycarbonate. Mgbe ọ kụrụ n'elu ọ gbazee na a molekul larịị na amama ya doro anya. A ghaghị ịrụ ọrụ dum n'ime ụlọ mechiri emechi nke ọma, nke na-egbochi onye ọrụ ahụ ịkpọtụrụ ọkụ ọkụ na-emerụ ahụ. Mgbe usoro nchacha ahụ, a ga-ezigara akụkụ ka ọ kpoo iji kpoo methylene chloride.
Kpochapu Urethane Nkedo maka Ime obere Number Prototypes
Urethane Vacuum Casting bu uzo di oso, nke aku na uba ka imeputa otutu ihe nke oge a choro obere olu. Ọ ga - ekwe omume iji urethane rụọ ihe iji mepụta akụkụ ahụ doro anya. Otú ọ dị, ọrụ a chọrọ ahụmịhe bara ụba na mpaghara a, ọkachasị ma a bịa n'okwu na nkọwapụta nke akụkụ mgbatị dị mgbagwoju anya.
CreateProto na-eji ihe dị iche iche magburu onwe ya na teknụzụ nke na-enye anyị ohere inwe ihe ịga nke ọma n'inweta akụkụ ihe nkedo na-enweghị oke ntụpọ ma ọ bụ jụ, ebe anyị nwere ike itinye nchikota nke usoro ziri ezi na silicones kwesịrị ekwesị na resins.
Họrọ onye na-ahụ maka ịhapụ ya ma tinye ya n'ọrụ n'ụzọ dị irè iji zere nsogbu na ntụpọ dị oke mkpa dịkwa mkpa, ndị ọrụ ntọhapụ nke Silicone na-ejikarị emeghachi omume na-adịghị mma, yabụ ọ ga-akpata nsogbu ịchọ mma ma ọ bụ ntụpọ ndị ọzọ, ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị na-akpụzi ga-ahọrọ elu-edu ihe onwunwe nke silicone ebu iji zere nsogbu ndị dị otú ahụ site na ịhapụ usoro, mana ọ ka bụ nnukwu ihe ịma aka n'ịgbazi resins doro anya.
Prototype Optical Compenents nke Automotive Lighting Oriọna
CreateProto na-elekwasị anya na ngosipụta ọkụ ọkụ dị ka ọrụ zuru oke nke nyere anyị ohere ịbawanye ihe ọmụma na ahụmịhe anyị na mpaghara a, ma ugbu a ọ bụ teknụzụ kachasị mkpa na mmepụta na CreateProto. Mepụta ụzọ iji mepụta ihe ngosi ọkụ ọkụ kachasị mma na ụlọ ọrụ na-eme ka anyị hụ na anyị nyere ndị ahịa anyị niile ọrụ kachasị mma.
Prozọ anyị na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe na-enye anyị ohere ịkwado ọrụ mmepe ọkụ. Site nyocha usoro ihe eji eme ihe na nyocha photometric development engineering iji gosipụta oriọna ụgbọ ala, anyị nwere ike ịkwado na ọkwa niile.
Ọkpụkpụ ọkụ ọkụ nke oriọna oriọna na n'ichepụta ọkụ na-arụ ọrụ bụ mpaghara dị mkpa ma nwee ike ịmetụta ọhụụ nhatanha na ojiji nke ngwa niile. Ahụmịhe anyị na ngalaba ihe nrụpụta akụrụngwa emeela ka anyị nwee ekele maka mpaghara a ma soro ndị ahịa anyị rụọ ọrụ iji hụ na ha dabara ma mechaa chọrọ.
N'inwekwuwanye nkà na ụzụ na-aga n'ihu na akụrụngwa dị elu, anyị nwere ike ịhazi ụdị oghere dị iche iche, oghere dị n'ime, ngosiputa, ọkpọkọ ọkụ, nduzi dị larịị, na nduzi dị ukwuu n'ụdị mgbagwoju anya ọ bụla, nke chọrọ n'agbanyeghị 3, 4, ma ọ bụ 5 -axis CNC machining, ọbụna ndị ọhụrụ diamond machining technology site Single Point Diamond machining (SPDM ma ọ bụ SPDT).
Anyị nwekwara ahụmịhe bara ụba iji hụ na radius nke kachasị mma nke 0.1mm iji hazie nkọwa maka ebe ikuku na mpaghara ndị ahụ. Igwe eji arụ ọrụ anya arụ ọrụ nwere ike iru +/- 0.02mm. Mgbe ahụ Emechara nwere ike nweta ihe kacha mma doo anya na ìhè transmittance site na anyị pụrụ iche polishing usoro. Ngwa ngwa anya ikpeazụ dị ezigbo mma, mma anya dị mma ma nwekwaa akara ọ bụla ma ọ bụ ọkọ.
Ihe omumu nke 1: Nkọwa nke Igwe Nzuzo maka Photometic Development Engineering Test
Prototype ìhè nduzi & ọkpọkọ anwansị egosi n'ụzọ ziri ezi gị otú ụgbọala gị ga-ele anya na ndụ n'ezie, na-enyere gị aka izere ihe ọ bụla dị oké ọnụ imewe emehie. Wayzọ a, ị nwere ike inyocha anya ikpeazụ nke echiche aesthetics design na photometric development engineering test. Ihe kachasị mkpa n'ime ha bụ nkọwa anya maka ntuziaka ọkụ niile, oge ịkpụzi maka atụmatụ ndị a ga-adị ogologo ma zie ezi, ngwa ọrụ ikpeazụ maka atụmatụ ndị a ga-abụ R0.1mm, nke dị mkpụmkpụ na obere, nke ziri ezi machining ekpebi ogo nke ìhè ndu ngwa anya arụmọrụ.
Anyị na-ejikọta 5-axis nkenke milling na diamond machining technology nke na-enye anyị ike igwe ihe mgbagwoju mgbagwoju shapes na ngwa anya nkọwa, tinye n'ọrụ a otu set-elu, kama n'ịrụ chọrọ onye fixturing na ikwugharị n'ọnọdu ọ bụla ọrụ na dị iche iche igwe.
Onye na-ere ahịa anyị, Jacky, na-agbakwụnye, sị: “Ruo ugbu a, ọtụtụ ndị ahịa anyị nabatara akụkọ a, RFQ amalitela ịbata maka akụkụ ndị ka sie ike. Ndị a bụ iwu ndị ahịa anyị na ha nwere aha dị ukwuu maka ịtụgharị akụrụngwa dị mma ma nyefee oge. Ozi ọma ahụ bụ na enwere m ike ịbịakwute ndị ahịa na ụlọ ọrụ ọhụụ nke chọrọ ikike ịhazi ọrụ dị mgbagwoju anya. ”
Ihe omumu nke abuo: Ntuziaka nke mmanu mmanu ugbo ala na PMMA mebiri emebi maka ahia
N'okwu a, okike nke ndị na-eme mkparị maka nka na ụzụ teknụzụ metụtara echiche dị ọcha nke mmanụ dizel dị ọcha, tankị ndị na-agbanye mmanụ maka ụgbọ ala ngwakọ ngwakọ, usoro nchekwa ikuku gas.
Dịka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nrụpụta, Createproto maara mkpa ọ dị isonye na obodo a haziri na teknụzụ nke teknụzụ. Endingga na igosi n'egwuregwu ahia na-enye ohere sara mbara maka ngwaahịa mmadụ na-ewulite netwọkụ na azụmaahịa ndị ọzọ ma na-enye ndị na-echepụta ohere imikpu n'ime obodo nke imepụta ihe ndị ọzọ. Anyị nwere ahụmịhe, ma nwee ọ workingụ isoro ụdị teknụzụ niile rụọ ọrụ nke ga-eme ngwa ngwa ka ngwaahịa gị bụrụ eziokwu.
E nwere ụzọ dị iche iche esi eme ụdị, yana usoro ndị ọzọ dịnụ nke nwere ike ime ka ihe ị mepụtara dị ndụ. Ma ị mepụtara ụkpụrụ echiche ma ọ bụ na ị ga-arụ ọrụ zuru oke, ị nyela ngwaahịa gị eziokwu iji jide n'aka na ngwaahịa gị na-ere ahịa maka ndị na-etinye ego ma baara ndị ahịa uru.
Fast Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Otito Prototyping na Manufacturing, CNC Prototyping, Otito Prototyping, CNC Rapid Prototyping,